အမေဇုံ Fire HD ကို 10 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: မှားယွင်းတဲ့ထောင့်ဖြတ်တောက်တဲ့အကုန်အကျအမှားထေူ - သတင်း Rule
အမေဇုံ Fire HD ကို 10 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: မှားယွင်းတဲ့ထောင့်ဖြတ်တောက်တဲ့အကုန်အကျအမှားထေူ
အမေဇုံ Fire HD ကို 10 ကောင်းတစ်ဦး Tablet ကိုမဖြစ်နှင့်၎င်း၏ယခင်သတ်မှတ်စံနှုန်းနှင့် Amazon ရဲ့အခြား Hardware အထိအသက်ရှင်နေထိုင်မပါဘူး.
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အမေဇုံ Fire HD ကို 10 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: မှားယွင်းတဲ့ထောင့်ဖြတ်တောက်တဲ့အကုန်အကျအမှားထေူ” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com သောကြာနေ့6နိုဝင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2015 07.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အဆိုပါ Fire HD ကို 10 Amazon ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် full-size tablet တစ်လုံး, ဒါပေမယ့်ဝေးလွန်းထောင့်လျှော့ချနှင့်စျေးပေါမဟုတ်ပါဘူး.
Amazon ရဲ့ Fire က tablet များလွန်ခဲ့သည့်လေးနှစ်အတွင်း hit နှင့်လွဲချော်ခဲ့ကြ. သူတို့ကတစ်ဦးလျောက်ပတ်သောမျက်နှာပြင်ကိုဆက်ကပ်, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်တင်းကျပ်စွာပေါင်းစည်းမှုရုပ်ရှင်များ၏ Amazon ရဲ့ဂေဟစနစ်သို့, တီဗီရှိုး, ဂီတ, အရာရာတိုင်းနီးပါး undercuts တစ်ဦးအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာစာအုပ်တွေနဲ့ apps များ. အဆိုပါ Fire HD ကို 10 ကြောင်းလမ်းကြောင်းသစ်ကိုဆက်လက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်.
တက်ဘလက်၏နောက်ကျောကိုအလွယ်တကူလက်ဗွေရာနှင့်ခြစ်တက်ယူလိုက်တယ်တစ်ခုရတဲ့အရာတွေပလပ်စတစ်ဖြစ်ပါသည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Fire HD ကို၏ဒီဇိုင်း 10 အလွန်အ utilitarian ဖြစ်ပါသည်. ပျော့ပျောင်းဖုံးလွှမ်း, ငါ box ရဲ့ထဲကရတဲ့၏စက္ကန့်အတွင်းအထိမ်းအမှတ်စီမံခန့်ခွဲကြောင်းရတဲ့အရာတွေပလပ်စတစ်, ဒါကြောင့်စျေးပေါကြည့်ရှု.
Amazon က tablet ကိုတာရှည်ခံဖြစ်ခြင်းများနှင့်ကျန်ရစ်သူအကြောင်းကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖန်ဆင်းတော် 200 အဆိုပါနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကုမ္ပဏီရဲ့လိမ့်ကျခြင်း Test အတွက်လှည့် iPad Air ရဲ့ 2'' ကိုယ့် 30. ငါကခြိုးဖောကျမပါဘဲကော်ဇောပေါ်ကိုကြောင့်အကြိမ်အနည်းငယ်ကျဆင်းသွား, ဒါပေမယ့်ကြိုးစားနဲ့ဖျက်ဆီးဖို့ထွက်မထားခဲ့ပါဘူး. ဒါဟာအတူတကွထည့်သွင်းကောင်းစွာခံစားရပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုငါမျှော်လင့်ထားကြပြီထက်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ပါသည်.
ခလုတ်များနှင့်ဆိပ်ကမ်းများအားလုံးထိပ်အစွန်းတန်းစီ, အရာတစ်ခုခုကိုကိုဆိုလိုသည်ဗီဒီယိုကြည့်ဖို့ကျင်းပခဲ့သည့်အခါသင်၏လက်ကို volume ကိုခလုတ်နဲ့နားကြပ် port ဒါမှမဟုတ် power ခလုတ်နှင့် microUSB port ကိုကိုဖုံးလွှမ်း.
အထူ 7.7mm မှာနိမ့်ဆုံး tablet ကိုများအတွက်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပါးလွှာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစ 10.1in widescreen ပတ်ပတ်လည်အတော်လေးကျစ်လစ်သိပ်သည်း bezel ရှိပါတယ်, သောကတက်ဘလက်များအတွက်ကျဉ်းမြောင်းရှည်လျားပေမယ့်ခံစားရစေသည်. 432g မှာတစ်ဘို့ကိုကိုင်ထားမှလေးလံလွန်းမက 40 တစ်မိနစ် TV မှာပြသ, ငါမူကားတစ်ဦးပြီးမြောက်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကအဖွင့်ကျားကန်ဖို့တစ်နေရာရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရ 2.5 တစ်နာရီရုပ်ရှင်.
အဆိုပါတည်ဆောက်မှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ် OK ကိုဖြစ်ကြသည်. screen ကိုအားလုံးကျအကြီးမားဆုံးရှောဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ 720p resolution နဲ့နိမ့် pixel သိပ်သည်းဆနှင့်အတူ 10.1in င့် 149 လက်မအရွယ်ကတော့ pixels per. နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ဘို့အများဆုံးတက်ဘလက်ကွန်ပျူတာကိုအနည်းဆုံး 200ppi ရှိတယ်. Amazon ရဲ့ယခင်ကြီးမားတဲ့ Fire HD ကို, ကိုကို HD 8.9, 254ppi အတူ 1080p မျက်နှာပြင်ရှိခဲ့ပါတယ်.
screen ကိုချွန်ထက်မက, စာသားစေသည်, icons များနှင့်ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာထက်လျော့နည်းကြည့်ရှု. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ဗီဒီယိုလွန်းဒါဟာအရေးမပါဘူး, ဖြတ်သန်းကြည့်ရှုပြီးသော, ပျမ်းမျှအားဖြင့်အရောင်နှင့်ကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုထောင့်နှင့်အတူ, ဒါပေမဲ့သည့်စာသား, icons များ, ဓာတ်ပုံများနှင့်အခြားအမှုအရာ static နဲ့သိသာ pixels ကြည့်ရှု.
သင်ကအပေါ်တစ်ဦးစာအုပ်ဖတ်ရှုဖို့ကြိုးစားသောအခါအထူးသဖြင့်သိသာင့်, အရာလွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ကနေတစ်စုံတစ်ခုနဲ့တူလှပါတယ်. Amazon ရဲ့ Bookerly typeface ကူညီပေးသည်ပေမယ့် - helvetica မှ switching ပြဿနာကို accentuates - ငါစာသားငါပုံမှန်အားဖြင့်ဖတ်ပြမယ်လို့အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့အချိန်မှာလုံလောက်တဲ့ရုံကြည်လင်ပြတ်သားစွာမဟုတ်ခဲ့ကြောင့်ခက်ခဲပြီးအချိန်အတန်ကြာအဘို့ကိုဖတ်ရှုတွေ့ရှိ.
တက်ဘလက်၏ဘေးထွက်ပေါ်တွင်စတီရီယိုစပီကာ tablet ကိုအသုံးပြုဘို့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းနဲ့အသံကျယ်ခဲ့ကြ. တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံဂီတကစားသမားအဖြစ်သုံးစွဲဖို့လုံလောက်တဲ့နေတုန်းပဲမကောငျး, ဒါပေမယ့်ချက်ပြုတ်နေစဉ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုများအတွက်ဒဏ်ငွေ.
Screen ကို: 10.1တွင် (1280 x က 800) LCD ကို (149ppi)
processor: MediaTek က Quad-core (1.5GHz Dual-Core + 1.2GHz Dual-Core)
ရမ်: 1RAM ကို GB ကို
သိုလှောင်ခြင်း: 16 သို့မဟုတ် 32GB; microSD slot ပါလည်းရရှိနိုင်
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Fire က OS က5Android ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့5Lollipop
ကင်မရာကို: 5လွှတ်တော်အမတ်နောက်ဘက်ကင်မရာက, 0.3အမတ် front-facing ကင်မရာကို
connectivity ကို: ဝိုင်ဖိုင်, ဘလူးတုသ်
ဒိုင်မန်းရှင်း: 159 x က 262 x က 7.7mm
အားနည်း hardware ပိုင်းညံ့ဖျင်းခြင်းအတွေ့အကြုံမှဦးဆောင်
တစ်ဦး microSD card slot ကို Fire HD ကိုများအတွက်အနည်းငယ်အပေါင်းရမှတ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် 10, သင်အလွယ်တကူပိုပြီးသိုလှောင်မှုကိုထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုခြင်း. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Fire HD ကို 10.1 quad-core MediaTek က Processor ​​နဲ့ RAM ကို 1GB ရှိပါတယ်, တက်ဘလက် powering ၏ task ကိုမှတက်တော်မူသောမဟုတ်ပါ. တချို့ကအမှုအရာဒဏ်ငွေသို့ပွေးလေ၏, ဒါပေမယ့်တကယ်တမ်းသူတို့ကိုပစ်လွှတ်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောတာဝန်များကိုအကြား switching တက်ဘလက်ပျက်ကျခဲ့ဖူးခြင်းရှိမရှိသင်စဉ်းစားမိပါစေဖို့လုံလောက်တဲ့ရှည်လျားတစ်ဦး lag အားဖြင့်ကတော့အောင်မြင်မှုမရသေးခဲ့သည်.
တက်ဘလက်ပထမဦးဆုံးဖွင့်တဲ့ချိန်မှာကြောင့်ဒဏ်ငွေလည်ပတ်. Amazon ရဲ့ချုပ် Instant Video ကိုမှပထမဦးဆုံးဗီဒီယိုလည်းဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်တယ် Loading. သင်ဒုတိယ load ရန်စတင်သောအခါမူကားရဲ့, သို့မဟုတ်အမှုအရာ creak မှစတင်နောက်ထပ် app ကိုပြောင်းရန်.
video playback တစ်ခါတစ်ရံတွင်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်နိုင်, ဒါပေမဲ့မကြာခဏဘောင်များနှင့် judder လွဲချော်မယ်လို့. homescreen ကဖြတ်ပြီးလှမ်းပိတ်လိုက်လည်းဆိုးဆိုးရွားရွားအဲလိုဘဲနိုင်ကြောင်း, ကို install လုပ်ဖို့ apps တွေတစ်တွားဖို့တက်ဘလက်ကိုဆောင်ခဲ့စဉ်.
ထိုကဲ့သို့သော Real Racing အဖြစ် graphics အထူးကြပ်မတ်ဂိမ်းများ3လုံးဝနီးပါး unplayable ခဲ့ကြ, ပင်မော်ကွန်းချိုင့်အချိန်ကနေ stuttered နေစဉ်.
ဘက်ထရီဗီဒီယိုဖွင့်နိုင်၏ပတ်ပတ်လည်ခုနစ်ခုနာရီကြာ. ဘက်ထရီသက်တမ်းများအတွက်အကြီးမားဆုံးပြဿနာကို screen တစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်အာရုံခံရှိသည်ပါဘူးအလိုအလျောက် Brightness ကိုချိန်ညှိလို့မပါဘူးဆိုတာပါပဲ, သောကမကြာခဏလည်းတောက်တောက်သို့မဟုတ်လွန်းမှိုင်းရဲ့ဆိုလိုတယ်.
charging အစဉ်အမြဲယူ. ဒါဟာအပြည့်အဝ Fire HD ကိုအားသွင်းဖို့ငါးနာရီကိုယူ 10. အများစုဟာတက်ဘလက်ကွန်ပျူတာနှစ်ဦးမှသုံးနာရီအတွင်းကိုအားသွင်း.
Wi-Fi နဲ့ဧည့်ခံလည်းဆင်းရဲသားကိုခဲ့သည်. တစ်ဦးချင်းတူအရပ်တွင် Google က Nexus ကို 6P သို့မဟုတ် iPad Air ရဲ့2ခိုင်ခံ့တဲ့ Wi-Fi ကို signal ကိုတက်ခူးမယ်လို့, ထို router မှ 12m ပတ်ပတ်လည်, အဆိုပါ Fire HD ကို 10 ရုန်းကန်မယ်လို့. apps နှင့်ဗီဒီယိုကို download အမြန်နှုန်းလည်းအရမ်းနှေးနှေးခဲ့ကြ. Router ကိုမှအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကိုကန့်သတ်ထားသည့်အချက်မဟုတ်ခဲ့.
Fire က OS က 5
Fire က OS က5ယခင် Amazon က Operating System ကိုကျော်တက်တဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Fire HD ကို 10 Fire က OS ကို Amazon ရဲ့နောက်ဆုံးဗားရှင်းနဲ့ကြွလာ 5, ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင်ရဲ့ Android အပေါ်အခြေခံပြီးသော5Lollipop. တစ်ဦးကအကျွမ်းတဝင် app ကိုဇယားကွက်ကို homescreen မှာရရှိနိုင်, ဒါပေမယ့်အမျိုးအစားများမှတဆင့်လက်ဝဲနှင့် sort မှလက်ျာဘက်လှမ်းပိတ်လိုက်.
စာအုပ်များမှဖြတ်ပြီးလှမ်းပိတ်လိုက်, ဥပမာအားဖြင့်, ထိပ်မှာသင့်ရဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်စာအုပ်များကိုဖော်ပြပေး, အခမဲ့စာအုပ်များများအတွက်အကြံပြုချက်များကိုသင် Amazon က Kindle တို့ကိုချုပ်သို့မဟုတ် Unlimited ရှိသည်နှင့်ထို့နောက်သင့်ဝယ်ယူသမိုင်းကိုအပေါ်အခြေခံပြီးနောက်ထပ်အကြံပြုချက်များလျှင်. တူညီသောဗီဒီယိုဝင်, ဂိမ်းများ, apps များ, ဂီတ, audiobooks, Newsstand နှင့် Amazon စျေးဝယ်.
လက်ဝဲ-အများဆုံးမျက်နှာပြင်မကြာသေးမီကအသုံးပြုသောသို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်ပစ္စည်းများကိုပြသထားတယ်, နောက်ကျောက content ထဲကိုရတဲ့၏အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုအရာဖြစ်ပါသည်.
ဒါဟာကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်, တစ်စားသုံးမှု-based Tablet ကို၏အကောင်းဆုံးစေသည်. ဒါဟာစံ app ကိုဇယားကွက်ကျော်လွန်သိသိသာသာသွားပြီဟုငါတွေ့ခဲ့ဖူးသမျှပထမဦးဆုံး Tablet software ကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်ကွဲလွဲကို Fire HD ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအရာပါပဲ 10.
ဆော့ဖ်ဝဲကို၏ကျန်အတော်လေးအဖြစ်မကောင်းမသင့်ဖြစ်၏. အမိန့်ကြော်ငြာစာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကို Wi-Fi ကိုအဘို့အလျင်မြန် Toggle တစ်ခုအစုံနဲ့တူလှပါတယ်ကြည့်ဖို့ထိပ်မှဆင်း swipe, ဘလူးတုသ်, မျက်နှာပြင်အလှည့်, နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အခြားသူများပါဘူး. ဒါပေမယ့်တကယ်တော့အများစုသည် Settings မျက်နှာပြင့် shortcuts တွေကိုများမှာ, မဟုတ် Toggle, စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည့်.
တဦးတည်းအမေဇုံအကောင့်ကိုတက်ဘလက်မှတ်ပုံတင်ခံရဖို့ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သားသမီးရဲ့ profile များကိုအပါအဝင်မျိုးစုံ user profiles များအားလုံး setup ကိုဖွစျစနေို, တစ်မိသားစု Tablet ကိုအဘို့ကောင်းသောအရာကိုဖြစ်ပါသည်.
Fire က OS က Android app တွေကိုအများအပြား run ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကိုသာ Amazon က app store ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်. ဒါဟာ apps များ၏ကြီးထွားလာသောရွေးချယ်ရေးရှိပါတယ်, paid-အပါအဝင် Amazon ၏ချုပ် "မြေအောက်" မြှင့်တင်ရေးခေါင်းစဉ်အောက်မှာအခမဲ့ရရှိနိုင် apps များ, ဒါပေမယ့် Google Play ကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်မပေးကြောင်းနှင့်အားလုံးနောက်ဆုံးပေါ် app များနှင့်ဂိမ်းများရှိသည်ပါဘူး.
ငါး-megapixel ကင်မရာနောက်ဘက်ကင်မရာနှင့် VGA front-facing ကင်မရာကိုက selfie သူတို့သည်ဆင်းရဲသားဖြစ်ကြ၏. သူတို့ကမှိန်ဖမ်းဆီးဖို့, မှိုင်း, အသေးစိတ်အတွက်ချို့တဲ့မှုန်ဝါးပုံရိပ်တွေကို.
သငျသညျကို 'အထူးကမ်းလှမ်းချက်' 'ဖယ်ရှားပစ်ရန်အပို£ 10 ပေးဆောင်မဟုတ်လျှင်ထို lockscreen ကြော်ငြာကိုဖော်ပြပေး. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ 16GB အမေဇုံ Fire HD ကို 10 သော့ခတ် screen ပေါ်မှာကြော်ငြာနှင့်အတူအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်£ 170 ကုန်ကျ. အဆိုပါ 32GB version ကို£ 200 ခန့်ကုန်ကျ, ထိုကြော်ငြာကိုမဖယ်ရှား£ 10 ပဲကုန်ကျစဉ်.
Samsung ရဲ့အလားတူ 9.7in Galaxy Tab ကိုတစ်ဦးက£ 179 ကုန်ကျ, ဝေးသာလွန် 8 ၏ Galaxy Tab ကို S2 သိုလှောင်မှု 32GB နှင့်အတူအမေဇုံကနေ£ 240 ကုန်ကျစဉ်. Apple ရဲ့ iPad ကိုစျေးအသက်သာဆုံး£ 219 ကုန်ကျ. Tesco အရဲ့ Hudl2£ 99 ကုန်ကျ, နှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ် High-end တက်ဘလက်အတော်ကြာပတ်ပတ်လည်£ 200 ရရှိနိုင်ပါသည်.
အဆိုပါအသစ် Fire က OS က5အချို့သောကောင်းသောစိတ်ကူးများရှိပြီး operating system ရဲ့ယခင်ဗားရှင်းများအနေဖြင့်တစ်ဦးခြေလှမ်းတက်ဖြစ်. Amazon ကသေဆုံး-Hard ကုမ္ပဏီ၏ရုပ်ရှင်များ၏ပေါင်းစည်းမှုကြိုက်လိမ့်မယ်, TV က, စာအုပ်များနှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှု.
သို့သော် 10in မျက်နှာပြင်ရုံ Amazon ရဲ့န်ဆောင်မှုများအများဆုံးပါစေမြင့်မားလုံလောက်တဲ့ resolution ကိုမဖြစ်, Processor ​​ကိုသူ့ကို graphically အထူးကြပ်မတ်ဂိမ်းများကို run ဖို့လုံလောက်တဲ့အစွမ်းထက်မဟုတ်ကြောင်းနှင့်ပင်ရိုးရှင်းပြီးတာဝန်များကိုနှင့်အတူကျန်ရစ်.
အဆိုပါ Fire HD ကိုအတူအကြီးမားဆုံးပြဿနာ 10 ဒါကြောင့်စျေးပေါမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်£ 100 ခန့်ကြီးဘူးဆိုရင်, အဆိုပါချို့ယွင်းချက်အများစုကိုအပြစ်မှလွှတ်နိုင်မည်, ဒါပေမယ့်£ 170 မှာပိုကောင်းအတွေ့အကြုံတွေကိုဆက်ကပ်ကြောင်းအပြိုင်အဆိုင်တက်ဘလက်များများရှိပါတယ်.
အကောင်းအဆိုး: အလွန်ကြီးစွာသော Amazon ကပေါင်းစည်းမှု, ခြိုးဖောကျမပါဘဲအနည်းငယ်ပေါက်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်, microSD card slot
Cons: အနိမ့် resolution ကို screen ကို, နှေးနှေး processor ​​ကို, laggy performance ကို, အားနည်းသော Wi-Fi ကို, အော်တိုမဟုတ် Brightness ကိုညှိနှိုင်းမှု, ဆင်းရဲသောသူကိုကင်မရာများ, အင်မတန်နှေးကွေးအားသွင်း
Tesco အ Hudl2ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: ငွေတက်ဘလက်တွေအများကြီး
အမေဇုံ Fire HD ကိုကလေးတွေက Edition ကို tablet ကိုပြန်လည်သုံးသပ်
အမေဇုံ Fire က TV အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: ရိုးရှင်းပြီး, အစာရှောင်ခြင်း, 4K နှင့်အကောင်းဆုံးကို TV ကထုတ်လွှင်
Amazon.com, Android မှာ, အပိုဒ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, Kindle Fire, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများ, နည်းပညာ
← အင်္ဂါဂြိုဟ်ကိုလိုနီလုပ်နည်း အနီရောင်ဂြိုလ်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုကိုအသွင်ပြောင်းငါးအင်္ဂါဂြိုဟ်ရှာဖွေတွေ့ရှိ →